5 Talaabooyinka Xiriirka Bulshada ee Xirfadlayaasha Iibka | Martech Zone
Waxaan la kulmay macmiil maanta fahmay aasaaska Twitter, Facebook, LinkedIn, iwm waxaanan doonayay inaan siiyo xoogaa jawaab celin ah. laga bilaabo in sifiican looga faa ideysto baraha bulshada. Macaamilku wuxuu ahaa xirfadle iib ah oo wuxuu doonayay inuu bilaabo inuu ka faa'iideysto aaladda laakiin ma uusan hubin sida uu isugu dheellitirayo shuruudihiisa shaqo isagoo sare u qaadaya istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada.
Taasi waa dhibaato guud. Isku xirka bulshada ee khadka tooska ah kama duwanaado isku xirka khadka tooska ah. Waad la kulantaa dadka, waxaad aqoonsataa iskuxirayaasha, waxaadna heleysaa oo aad dhiseysaa xiriirro lala yeesho saamileyaal iyo rajo. Si fudud ugama dhex geli kartid dhacdadii ugu horreysay ee Roob-sameeyeyaasha oo waad sameyn kartaa tan (Roob-sameeyayaashu waa a kooxda isku xirka gobolka taasi waxay leedahay koritaan qarxa). Waxay qaadataa waqti, waxay ubaahantahay xoogaa qodis ah, iyo ugu dambeyntiina xawaare si loo bilaabo macaashka shabakadaada. Tani waa sida runta ah ee khadka tooska ah sida ay offline tahay.
5 Talaabo oo si guul leh looga faa’iideysto isku xirka bulshada si loo wado iibka
Ka hel khadka tooska ah: Dhis adiga LinkedIn furo, furo a Twitter xisaabta, iyo haddii aad rabto inaad dedejiso hawsha (oo aad waqti badan geliso), bilow inaad ku qorto baloog meheraddaada. Haddii aadan haysan baloog, markaa raadso baloogyo kale oo aad wax ku darsan karto.
Aqoonsiga isku xirayaasha: Hal dariiqo oo deg deg ah oo lagu helo isku xirayaasha kooxdaada ayaa ah inaad ku biirto shabakad internetka ah sida LinkedIn. On Twitter, waxaad ku sameyn kartaa tan adigoo baaraya hashtags iyo helitaanka dadka ka dambeeya tweets-ka warshadahaas. Qalab casri ah sida Radiyoo6 sidoo kale kaa caawin kara halkan!
Blogs, isbeddelada ugu dambeeyay ee Technorati ayaa runtii kaa caawin kara inaad soo koobto bartilmaameedyadaada. Sameynta raadinta baloog erey sida CRM ah ayaa ku siin kara liistada baloogyada, si ay caan u yihiin! Kudar cunnooyinkan akhristaha aad ugu jeceshahay quudinta!
Dhis Xiriirka: Markaad aqoonsato iskuxirayaasha, bilaw inaad kudariso waxa kujira adoo kudaraya tabarucaadka khuseeya adoo adeegsanaya faallooyinka iyo tweets. Ha is-hormarin… kuwani maahan dad gadashada alaabooyinkaaga, iyagu waa kuwa sameyn doona hadal ku saabsan alaabtaada iyo adeegyadaada.
Soo jiidasho soo socota: Iyagoo ku biirinaya wada hadalka iyo awooda dhismaha ee warshadahaaga - xiriiriyeyaasha ayaa ka hadli doona adiga adiga iyo saameyntu way bilaabi doonaan inay ku soo raacaan. Furaha halkan ayaa ah in la bixiyo, la bixiyo, wax la bixiyo… ma bixin kartid wax kugu filan. Haddii aad ka walwalsan tahay dadka inay si fudud u xadaan macluumaadkaaga una adeegsadaan iyagoo aan lacag ku siin you ha sameyn! Dadkaas waligood lacag kuma siin doonaan, si kastaba ha noqotee. Kuwa doonaynin lacag bixintu waa kuwa wali bixin doona.
Bixi Jid Ka Qaybqaadasho: Tani waa halka uu blogku runtii ku yimaado waxtar! Hadda oo aad heshay dareenka dadka, waxaad u baahan tahay inaad dib ugu soo celiso meel ay ganacsi kula yeeshaan. Bogagga, waxay u noqon kartaa wicitaan-ku-ficil dhinacaaga ama foomka xiriirka. Sii qaar ka mid ah bogagga diiwaangelinta ee soo dejinta ama websaydhka. Haddii aysan jirin wax kale, waxaad siisaa boggaaga LinkedIn si aad ula xiriirto iyaga. Wax kastoo aad go aansato, iska hubi inay fududahay in la helo… sida ugu fudud ee ay kula xiriirayso, dadka ayaa intabadan lahaan doona.
Xiriirinta bulshada ee soo saarista iibka ma ahan wax dhib ah laakiin waxay qaadan kartaa waqti dheer. Sida hoos u dhigida yoolalka iibka ee tirada wicitaanada aad sameyneyso, tirada shirarka aad ka qeyb galeyso iyo tirada xirnaanshaha aad sameyneyso. aad raaceyso, xiriirineyso, waxna ku dareyneyso Markaad ciyaartaada gasho, iskaa wax u qabso boostada martida ama ku xidho kuwa isku xira ama saamileyaasha martida ku dhaji bartaada. Ganacsi dhagaystayaashu waa hab fiican oo lagu ballaariyo shabakaddaada.
Markaad sii waddo inaad ka shaqeyso shabakaddaada oo aad xiriir la sameysid xiriiriyeyaasha iyo saamileyaasha, waxaad helaysaa xushmadooda oo waxaad naftaada u fureysaa fursado aadan waligaa aqoon. Waxaan la tashanayaa maalin kasta hadda, si joogto ah u hadla, qor buug iyo ganacsi sii kordhaya - dhammaantood waxaa laga dhisay istiraatiijiyad isku xirnaanta bulshada. Waxay qaadatay sanado in halkan la yimaado - laakiin si fiican ayey ugu qalantay! Halkaas ku laalaad!
Tags: isku xirnaanta khadka internetkaxirfadlayaasha iibkaiibinta warbaahinta bulshadashabakada warbaahinta bulshadaiibinta bulshada
Nov 12, 2009 saacadu markay tahay 3:03 PM
Inaan noqdo lataliye waqti dambe qaatay baraha bulshada macluumaadkan wuxuu ii ogolaanayaa inaan si hufan ula shaqeeyo waqtiga aan qorsheynayo inaan ku bixiyo sidii aan horey ugu sii wadi lahaa xirfad ahaan - la xiriirta warbaahinta bulshada. Waad ku mahadsantahay aragtida Doug.
Nov 12, 2009 saacadu markay tahay 3:33 PM
Waxaad qabataa shaqo wanaagsan oo muujineysa in xiriirka xiriirku weli yahay xirfad waxqabadka iibka asaasiga ah. Si kastaba ha noqotee, qaababka qaar ayaa la beddelay ama la xoojiyay.
Waxaan u maleynayaa in dadku ay lumiyeen xoogaa fursad dhab ah markii ay qiimo dhimis ku sameeyeen baraha bulshada sida habka aqoonsiga fursadda iyo dardargelinta xiriir sameynta.
Jan 5, 2017 saacadu markay ahayd 3:16 PM
Kordhinta xiriir wada shaqeyn gudbin xawli leh ayaa saameyn badan ku yeelan kara ganacsigaaga waxkastoo ku saabsan wax kasta oo kale oo aad qabato sanadkan. Adeegso aalado bilaash ah sida Referrals-In.com si aad uga faa'iideysato LinkedIn si aad ugu kordhiso shabakada lamaanaha gudbinta.